Maalinta: Noofambar 6, 2019
KARDEMİR wuxuu helay Abaal marin Koowaad ee Soosaarka Joogtada ah
Abaalmarinta wax-soo-saarka ee 2019 ee ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda si loo taageero daraasadda hufnaanta leh ee shirkadaha ku wajahan kordhinta tartanka waddankeenna iyo in lagu dhiiri-geliyo mashaariicda lagu xaqiijiyey goobtan, KARDEMİR waxay heshay “ [More ...]
GaadiidkaPark Marti geliya TÜRSİD
GaadiidkaPark waxay martigelisay TÜRSİD; Shirka 15 ee Railway iyo Khadka Wakiilka ee Ururka Dhamaan Hawl wadeenada Nidaamka Tareenka (TÜRSİD) waxaa lagu martiqaaday Ulasim Park A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli. 9 guud ee Turkey ayaa ka gobolladiisii ​​oo kala duwan [More ...]
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, Kabatas-Mahmutbey Metro Line ee xafladda dhameystirka tuneelka tareenka, ayaa sheegay shilka baska ee dadweynaha Basiktas. Imamoglu, Basaska Dadweynaha 'Monopoly ma aqoonsan doono fursadda' ayuu yiri. Imamoglu, oo ahaa maalintii ugu dambeysay ee reer Istanbul [More ...]
Duqa Magaalada İmamoğlu wuxuu ku dhawaaqay Taariikhda Furitaanka ee Kabataş Mahmutbey Metro Line
Duqa Magaalada İmamoğlu wuxuu ku dhawaaqay Taariikhda Furitaanka ee Kabataş Mahmutbey Metro Line; Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu ayaa ka hadlay xaflada dhameystirka xeryaha Kabataş-Mahmutbey Metro Line ee dhererka 19-kilomitir. 24,5 bin hal jiho [More ...]
Taariikhda 'Paşabahçe Ferry' waxay dib u fureysaa Bosphorus
Paşabahçe Ferry taariikheed, oo sugaya in maalinku noqdo bire xeebta Beykoz, ayaa markale la kulmi doona Bosphorus iyadoo la bilaabayo hindisaha IMM. 10 Doontii ay ugu deeqday Dowlada Hoose ee Magaalada Beykoz ee Magaalada Magaalo Xeebeedka Istanbul waxaa dib u soo celiyay Şehir Hatları A.Ş. [More ...]
Hoolka Shiinaha ee Railway Express Held wuxuu ka socdaa Xarunta Tareenka ee Ankara
Shirkadda Tareenka ee Shiinaha ayaa lagu sharfay Saldhigga Tareenka ee Ankara; Tareenka ugu horreeya ee xamuulka qaada oo ka tagi doona Shiinaha una sii gudbi doona Yurub isaga oo adeegsanaya Marmaray, ayaa loo diray Xarunta Railway Express ee Ankara Station iyada oo xaflad loo qabtay. Wasiirka Turhan, Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan [More ...]
Shirkadda Tareenka ee Shiinaha ayaa tilmaam cusub siisay Gaadiidka tareenka adduunka; China Railway Express, tareenka ugu horreeya ee xamuulka qaada oo ka tagaya Shiinaha kuna tagaya Yurub oo adeegsanaya Marmaray, 06 November 2019 wuxuu joogi doonaa Saldhigga Ankara iyadoo xaflad la sameynayo [More ...]
KARDEMİR wuxuu Bilaabey Soo Saaridda Gawaarida Tareenka ee Guryaha iyo Qaranka; Kardemir wuxuu bilaabay soosaar ballaaran iyo shixnad gudaha iyo qarankaba BA318 tareenka xamuulka qaada ah ee xamuulka qaada. Noocyada taayirrada tareenka nooca loo yaqaan 'BA004' [More ...]
Daraasadda Calaamadaha Gaadiidka ee Alanya; Kooxda Antalya Metropolitan Municipal Alanya Service Unit Trafik team kooxda calaamadaha taraafikada waxay xireen calaamada taraafikada ee 102 meelo kala duwan oo xaafada 700 ah ee Alanya. Antalya Dawlada Hoose ee Alanya Alanya Service Unit Traffic Sign [More ...]
Tababbarka xakamaynta cadhada ee Darawalada iyo Martida ee Antalya
Xakamaynta Cadhada iyo Tababbarka Isgaarsiinta Saxda ah ee Wadayaasha Antalya; Dowlada hoose ee Antalya waxay sii wadaysaa tababarkooda shaqaalaha. Xakamaynta cadhada ee Waaxda Adeegyada Bulshada ee darawalada iyo martigaliyayaasha u adeegaya shakhsiyaadka gaarka ah [More ...]